Laba jiir oo lagdamaya sawirkooda oo noqday midkii ugu cajiibsanaa - Worldnews.com
Xaruunta dabagalka cudurka Coronavirusee ee dalka Itoobiya ayaa sheegtay tani iyo marka uu cudurka dillaacay xaruunta in la soo gaarsiiyeyy 29 qof oo cudurkaasi looga...
BBC News 2020-02-08
Cudurka shiinaha ka dillaacay ee Coronovirus ma mid duurjoogta loo soo diray baa?
Saynisyahannada ayaa tuhunsan in ay u badan tahay in cudurka coronavirus uu ka soo faracmay suuq lagu iibiyo kalluunka oo ku yaal magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha,...
BBC News 2020-02-01
Dalxiise Shiinees ah ayaa Faransiiska ugu dhintay caabuqa coronavirus kaasi oo noqday qofkii ugu horreeyay oo cudurkan ugu geeriyooda meel ka baxsan Aasiya. Dalxiisaha...
BBC News 2020-02-15
Soomaaliya maxay la tageysaa shir madaxeedka Midowga Afrika?
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa shir madaxeedka 33-aad ee Midowga Addis Ababa ka furmay la tagtay arrima badan oo quseeya nabadda, siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Furitaanki shirkaasina Madaxweynaha Masar C/fataax Siisi oo ahaa guddoomiyihi hore e midowga Afrika ayaa xilka Guddoomiyanimada ku wareejiyey Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa.Soomaaliya...
Qofkii ugu horreeyay oo caabuqa coronavirus ugu dhintay meel ka baxsan Shiinaha
Nin ayaa waxa uu caabuqa coronavirus ugu dhintay gudaha waddanka Philippines, kiiskaas oo noqonaya midkii ugu horreeyay ee la xaqiijiyo ee ka dhaca meel ka baxsan waddanka Shiinaha. Bukaanka oo 44 jir Shiinees ah ahaa ayaa waxa uu ka tagay magaalada Wuhan, ee gobolka Hubei, ee caabuqan uu ka soo bilowday. Waxa uu u muuqanayay inuu caabuqu haleelay ka hor inta uusan gaarin...
Doorashada Qoor Qoor xasillooni ma u horseedi doontaa Galmudug?
Xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa maanta madaxweynaha cusub ee maamulkaasi u doortay, Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor inkastoo doorashadaasi ay qaadaceen garabka Ahlu Suna iyo madaxweyne Axmed Ducaale Xaaf. Qoor Qoor ayaa la sheegay inuu helay 66 cod halka musharixii ugu so dhawaana, Cabdullaahi Axmed Samatar, uu helay 9 cod o kali ah. Dhawaan ayaa garabka Ahlu Sunna waxay...
Diyaarad ay leedahay Qatar Airways oo ka soo duushay Magalaada Doxa kuna sii jeeday Bangkok, ayaa la kulantay arrin nadir oo ay adag tahay in lagu arko duulimaadyada diyaaradaha. Diyaaradda oo hawda ku jirtay ayay shaqaalihii saarnaa waxay dadkii rakaabka ahaa weydiiyeen hadii uu jiro qof dhakhtar ah oo saaran diyaaradda. Dadkii diyaaradda saarnaa ayaa isweydiiyay sababta...
Vanuatu: Maxaa ka dhigay mid ka mid ah meelaha ugu farxadda badan dunida?
Mid ka mid ah meelaha dhulka ugu farxadda badan ayaa ku taal badhtamaha badda Baasifigga, waa Vanuatu. Dalkan saddex geesoodka ah ee ay ku dhex yaallaan, ku dhawaad 80-ka jasiiradood, ee u dhaw una jira wax gaadha 2,000km bariga Australia, ayaa ka mid ah afarta dal ee ugu farxadda bada dunida. Sidoo kalena dalalka ka baxsan America waa dalka ugu farxadda badan, marka loo eego...
Magaaladii Haweenka:Goob ay isugu tageen Haweenkii rabshadaha Colombia saameeyeen Waddada ugu weyn Magaalada Haweenka Intii lagu jiray rabshadihii hubaysnaa ee in kabadan nus qarni ka socday Colombia, isla mar ahaantaana dhiigga badani ku daatay ee u dhexeeya jabhadaha iyo milletariga wadankaasi ayaa ku qasbay ku dhawaad sideed milyan oo qof inay guryahooda ka cararaan....